I Saraha sy i Abrahama mampiantrano anjely telo miakanjo fotsy.
I Saraha dia vadin'i Abrahama izay reny niteraka amin'ny fomba mahagaga an'i Isaka na dia antitra sy momba aza. Saray no anarany talohan'ny niovany ho Saraha. Anabavy iray ray fa samy hafa reny amin'i Abrahama izy.
1 I Saraha ao amin'ny fivavahana jiosy sy kristiana
1.1 I Saraha ao amin'ny Testamenta Taloha
1.2 I Saraha ao amin'ny Testamenta Vaovao
1.3 I Saraha ao amin'ireo literatiora jiosy midrasika
2 I Saraha araka ny finoana silamo
I Saraha ao amin'ny fivavahana jiosy sy kristiana[hanova | hanova ny fango]
I Saraha ao amin'ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]
Voaresaka misimisy kokoa ny amin'i Saraha ao amin'ny Testamenta Taloha indrindra fa ao amin'ny Bokin'ny Genesisy. I Saraha, izay natao hoe Saray, dia vadin'i Abrahama, izay natao hoe Abrama. I Saraha sy i Abrahama dia iray ray fa samy hafa reny (Gen. 20.12). I Tera no rain'izy ireo fa ny renin'i Saraha kosa dia i Iona ary ny renin'i Abrahama dia i Salmota.
Niseho Andriamanitra nandritra ny famangiana (Gen. 18.1-15) nataon-dehilahy telo nandalo teo amin'ny hazo oaka tao amin'ny tananan'i Mambre (na Mamre) izay nampandrosoin'i Abrahama. Nasain'i Abrahama nanamboatra mofo ho hanin'ny vahiny i Saraha. Ny iray amin'ireo lehilahy telo dia nanambara fa hitoe-jaza i Saraha izay efa antitra ka nihomehy i Saraha. Henon'Andriamanitra izany ka nanomezany tsiny an'i Abrahama. Natahotra i Saraha ka nandainga tamin'ny filazany fa tsy nihomehy izy nefa Andriamanitra nahalala ny marina.
Nihevi-tena ho momba ihany i Saraha ka nanolotra an'i Hagara mpanompo vaviny ho vadin'i Abrahama mba hahazoany zanaka ho azy. Rehefa nitoe-jaza i Hagara ka hiteraka an'i Ismaela dia nanambany an'i Saray izay nitaraina tamin'i Abrahama noho izany (Gen. 16). Notanterahin'Andriamanitra ny fanirian'i Saraha dia nitoe-jaza izy ka niteraka an'i Isaka.
Ny fahaterahan'i Isaka dia nampanantenain'Andriamanitra an'i Abrahama sy an'i Saraha (Gen. 17.19-21), taorian'ny fanambadiana tsy misy zaza, ka famantarana ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy ireo izany araka ny maha mpandova ny Fanekem-pihavanana an'i Isaka. Voalaza ao amin'ny Bokin'i Isaia i Saraha amin'ny niterahany ilay zaza nampanantenaina an'i Abrahama hanome taranaka maro an'i Abrahama (Is. 51.2).
Maty tamin'ny faha-127 taonany i Saraha dia nelevina tao amin'ny zohy eo amin'ny sahan'i Makpela mifanolotra amin'ny tananan'i Mambre (na Mamre) ao amin'ny tany Kanana (Gen. 23.19).
I Saraha ao amin'ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]
Miresaka an'i Saraha ihany koa ireo manoratra ny Testamenta Vaovao. Voalaza ho mpiray finoana amin'ny vadiny izy ao amin'ny Epistolà nosoratan'i Paoly ho an'ny Romana (Rom. 4.19). Ny Epistolà ho an'ny Hebrio dia maneho azy ho isan'ireo ao olona filamatra ao amin'ny Baiboly halain'ny mpino tahaka. Ataon'ny mpanoratra ny Epistolà voalohany nosoratan'i Petera renin'ny Kristiana i Saraha noho ny fananany toetra mahay manoa (1Pet. 3.6). Ao amin'ny Epistolà ho an'ny Galatiana dia oharina amin'i Hagara sy i Saraha ny Fanekem-pihavanana taloha sy ny Fanelem-pihavanana vaovao (Gal. 4.22-26, 28, 31).
I Saraha ao amin'ireo literatiora jiosy midrasika[hanova | hanova ny fango]
Ny midrasa taty aoriana dia manao izao tantara tsy ao amin'ny Baiboly izao: nilaza ireo Jentilisa fa zanak'i Hagara i Isaka fa tsy an'i Saraha, nataon'Andriamanitra maina ny nonon'ny vehivavy tao amin'izy ireo ka tonga ireto vehivevy ireto nitalaho tamin'i Saraha sady nanoroka ny vovoka teo amin'ny tongony mba hampinonoan'i Saraha ny zanak'izy ireo. Nataon'i Saraha tokoa izany.
I Saraha araka ny finoana silamo[hanova | hanova ny fango]
Ao amin'ny fivavahana silamo dia vady voalohan'ny mpaminany Abrahama i Saraha sady renin'i Isaka. Omen'ny Silamo haja i Saraha noho ny finoany; nefa tsy voalaza mivantana ao amin'ny boky Kor'any ny anarany sahala amin'i Hagara koa. Tsy nisaraka tamin'i Abrahama izy nandritra ny fiainany ary na dia momba tsy miteraka aza izy dia nampanantenain'Andriamanitra ara-paminaniana fa hiteraka an'i Isaka sy hanana zafikely atao hoe Jakoba.
Raha mbola tsy nanan-janaka i Abrahama noho ny hamomban'i Saraha dia tsy nitsaha-nivavaka tamin'Andriamanitra mba hahazoany zazalahy. Nomen'i Saraha an'i Abrahama ny mpanompo vaviny, dia i Hagara mba ho vadiny faharoa. Niteraka an'i Ismaily tamin'i Hagara i Abrahama tamin'ny faha-86 taonany, dia i Ismaela izay ho lasa mpaminany koa.
Telo ambin'ny folo taona taty aoriana dia nanambara tamin'i Abrahama, izay efa zato taona, Andriamanitra fa na dia momba aza i Saraha dia hiteraka zazalahy ho an'i Abrahama izay hatao hoe Isaka sady ho tonga mpaminanin'Andriamanitra koa. Voalaza ao amin'ny Kor'any koa ny amin'ny fihomehezan'i Saraha raha nanambara ny hahaterahan'i Isaka ireo anjely. Mety avy amin'ny fototeny izay midika hoe "mihomehy" ny anarana hoe Isaka. (Kor'any 11.69.72).
↑ "Sainte Généalogie" araka ny Livre de la Caverne des trésors
↑ "Sarah" in Encyclopaedia Universalis
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Saraha&oldid=972088"
Voaova farany tamin'ny 11 Jolay 2019 amin'ny 04:18 ity pejy ity.